Fitsaram-bahoaka :: Olona enina maty novonoina teo ankalamanjana • AoRaha
Miverina indray. Tsy namelan’ireo fokonolona tany Beranofary-Tsarabaria any Iharana raha tsy namoy ny ainy avokoa ireo lehilahy miisa enina voalaza fa jiolahy avy nanafika tokantrano iray tany an-toerana, tamin’ny alin’ny 18 jolay lasa teo. Miisa valo ireo mpanafika tamin’io no nandroba lavanila milanja 150 kilao tao amin’ilay trano. Tafatsoaka ny roa tamin’ireo jiolahy.
Vao maraina be, omaly tokony tamin’ny 1 ora mahery, no nitrangan’ity fanafihana tokantrano ity. Nitondra basy poleta maro ireo jiolahy. Tsy afa-nanohitra ny mpandraharaha mpividy lavanila tao amin’io trano io, fa nanaiky mora an’izay nataon’ireo jiolahy. Nanenjika avy hatrany ireo fokonolona vao vita ny fanafihana, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Nisy niantso ireo zandary tany Ampanefena, lalana atao dia an-tongotra mandritra ny ora efatra miala eo Beranofary. Efa tra-tehaky ny mpanenjika ny enina tamin’ireo voalaza fa jiolahy mandra-pahatongan’ireo zandary. Nanalan’ireo mponina ny fony izy ireo. Nofatorana ireo jiolahy. Ankoatra ny fikasihan-tanana, nisy ireo nively hazo, tao ireo nandray vatobe, ka nanatonta izany tany amin’ny lohan’ny sasany tamin’ireo jiolahy. Vatana mangatsiaka sisa no novantanin’ireo mpitandro filaminana.
“Hita tany amin’ireo olona maty ny basy poleta roa sy lavanila milanja 90 kilao eo ho eo”, araka ny loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimaria. Nidina avy hatrany any amin’io toerana io ny lehiben’ny Zandarimaria ao amin’ny Faritra Sava vao naheno an’ity tranga nampalahelo ity. Nanao fanentanana an’ireo mponina mba tsy hanao fitsaram-bahoaka, fa hanolotra ny olon-dratsy amin’ny mpitandro filaminana ny lehiben’ny Zandarimaria. Nanao ny fomba rehetra mba hananan’ireo mponina fitokisana ny mpitandro filaminana ihany koa izy tamin’ny fizaràna ny laharan’ny finday an’ireo lehiben’ny Zandarimaria any an-toerana.
Raha somary efa tsy nahitana tranga intsony ny fitsaram-bahoaka tato anatin’ny volana vitsy izay, dia miverina indray izany any amin’ny Faritra Sava. “Toerana somary lavitra io nisian’ny tranga io, ka ahiana ho mety izay no antony nisian’ilay fitsaram-bahoaka”, hoy fotsiny ny fanazavana azo amin’ny manampahefana any an-toerana.
Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha kamiao valo niara-namoy ny ainy
Fianjerana teny ambony fiaramanidina :: Natao fitsirihana ny razan’ilay tovovavy Anglisy